Cygnus-X1, bọọdụ na-emeghe emeghe ebe a na-ahụ maka igwe rọketị | Site na Linux
Cygnus-X1, bọọdụ na-emepe emepe maka njikwa rọketi ụlọ
Ọchịchịrị | | Noticias
Echere mọtụtụ n'ime anyị na-arọ nrọ dị ka ụmụ inwe otu ụbọchị ihe ùgwù nke inwe ma ọ bụ ofufe a arụrụ n'ụlọ roket ma ọ bụ obere ụgbọ mmiri emebere iji fee ma karịa ihe niile ịnwe iwu nke nwere ike inye anyị nnwere onwe iduzi ya na uche anyị.
Taa, dị ka ndị a, ọtụtụ mmadụ emezuola nrọ ahụ Ọfọn, enwere ụfọdụ ụdị azụmaahịa ị nwere ike ịzụta ma ọ bụ n'ihe banyere drones, ihe yiri ihe anyị gaara achọ ka ụmụaka.
Ma ka-eme ihe n'eziokwu, ọtụtụ n'ime anyị ga-n'anya chepụta ngwaọrụ jiri aka anyi na ike nile muta otu esi achikota ya na otu akuku o bula na aru oru.
Ọ dịkwa mma taa m bịara ịkọ ozi Achọpụtara m na net banyere ihe yiri nke m na-akọwa na nke ahụ bụ ihe omume Cygnus-X1 na-emepe emepe bọọdụ emeghe maka igwe ugboelu na-agbanye njikwa njikwa na usoro metụtara ya.
Ndị na-anụ ọkụ n'obi ha nwere ike iji efere ahụ mee ka ụgbọ elu nke ụrọ a na-arụ n’ụlọ kwụsị ọrụ na karịa ihe niile na ihe kachasị mkpa gbasara ọrụ a, bụ na ekesara mmepe ahụ n'okpuru ikikere GPLv3.
Site na nke anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke eserese dịnụ, PCB imewe na nkọwapụta maka EasyEDA (Electronic Design Automation) simulator.
Akụkụ ọzọ nke na-anọghị na ọrụ ahụ bụ na mbadamba ahụ kwekọrọ na Arduino IDE na gburugburu mmepe Platformio.
Na mgbakwunye na eziokwu ahụ bụ na e dere akụrụngwa ngwanrọ na C ++ na dịka isi, a na-eji SAMD51 microcontroller, nke na-arụ ọrụ na a ugboro nke 120 MHz na nwere 1 MB nke wuru na-Flash ebe nchekwa.
Enwere ike iji Flash ma ọ bụ kaadị SD dị na mpụga iji dekọọ telemetry n'oge ụgbọ elu. A na-ebufe data na iwu site na Bluetooth Low Energy (BLE), nke na-enye gị ohere iji ama ama nkịtị maka njikwa.
A na-enye ọwa atọ nke njikwa njikwa: abụọ maka mmegharị nke ọnụ ahụ mgbe vector na-agbanwe agbanwe na otu maka sistemụ ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, iji mee ka nkedo nke parachute rụọ ọrụ. Enwekwara pyrochannels abụọ maka igbanye ọkụ na plọg na-egbukepụ egbukepụ na ọwa eletriki igwe eletrik iji gbanwee igwe site na gyro.
Enwere ike iji batrị 2S ma ọ bụ 3S LiPo dị ka isi iyi ike. N'ime ihe mmetụta ejiri mee ihe bụ accelerometer-gyro (IMU BOSCH BMI088) na altimeta (MS560702). UART na I2C njikọta dị iji jikọọ mgbakwunye ihe mmetụta dị ka modulu GPS.
N'ime njirimara ndị na-apụ na ọrụ ahụ, akpọrọ ihe ndị a:
Dabere na SAMD51 microcontroller na-agba ọsọ na 120 MHz na 1 MB nke ọkụ. (ATSAMD51J20A-MUT).
Njikwa site na Bluetooth Low Energy (LEcha), nke a na-enye ohere ka eziga data ma nata n'etiti rọketi na smartphone.
3 Servo Channels (A na-eji ụzọ abụọ ahụ eme ihe maka ịkụda aka na otu maka ihe ndị ọzọ dị ka sistemụ ikuku parachute).
2 Pyro Channels nwere ike igbanye igwe ọkụ na nichrome waya. Ofụri Esịt PWM controllable maka agbanwe ugbu a akara.
1 x DC onye nchịkwa moto maka oge ndị ahụ ịchọrọ ịchịkwa njikwa na wiilị mmegharị.
Ọ na-arụ ọrụ na batrị LIPO 2S na 3S. 3S ọkacha mma (11,1V)
Ọ gụnyere ọnụ ọgụ iji zere ọdịda na ọwa pyrotechnic.
Isi IMU (BOSCH BMI088) na altimita (MS560702)
SD kaadị n'ọdụ ụgbọ mmiri otú i nwere ike ịzọpụta gị data.
16MB nke mpụga flash nchekwa. Chekwa data n'oge ụgbọ elu (njikọ SD kaadị nwere ike ị ghara ịdị na-efe efe n'oge ụgbọ elu n'ihi ụda)
Buzzer na RGB Neopixel LEDs
Agbakwunye UART na I2C njikọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ijikọ sensọ mpụga dị ka modulu GPS.
N'ikpeazụ, ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmatakwu banyere ya nke oru ngo ị nwere ike ịkpọ nkọwa, akwụkwọ ntuziaka na eserese Na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Cygnus-X1, bọọdụ na-emepe emepe maka njikwa rọketi ụlọ
Ka anyị zoro ezo dozie asambodo akwụkwọ na ngwaọrụ gam akporo ochie
Komorebi: Etu esi hazie tebụl anyị na esemokwu esemokwu?